Ogaden News Agency (ONA) – Waraysi dheer ooy layeelatay Idaacada ESAT ee afka Axmaariga ku baxda Masuul ka mdi ahaa wafdiga Jigjiga tagay oo katirsan Ururka OPDO.
Waraysi dheer ooy layeelatay Idaacada ESAT ee afka Axmaariga ku baxda Masuul ka mdi ahaa wafdiga Jigjiga tagay oo katirsan Ururka OPDO.
Posted by ONA Admin	/ December 13, 2013
Ururkan oo katirsan isbahaysiga maqaar saarka ah ee Woyaanuhu ku adeegtaan ee loo yaqaano EPRDF ayuu masuulkan oo magaciisa laqariyay arimo amniga laxidhiidha awgood kusoo bandhigay xog xasaasi ah. Wuxu masuulkan ka waramay xog sir ah oo ku saabsan qaabkii ay ooga qayb galeen Madaxda iyo Masuuliintii ka socotay EPRDF kuwaasoo uu masuulkan kamid ahaa.
Masuulkan lawaraystay ayaa siqoto dheer leh ooga warbixiyay waxyaabihii ay kala kulmeen xuskii dhalan rogga ee borobagaandaha raqiiska ah looga gollahaa oo dhawaan lagu qabtay Magaalada Jigjiga. Sida uu masuulkan shaaca kaqaaday in lagu qasbay inay tagaan Jigjiga waftiga uu isagu kamidka ahaa oo ka socday EPRDF cabsi aad ubalaadhan oy kaqabeen darteed in lagu laayo Ogadenia haday cagta saaraan. Wuxuu yidhi isagoo hadalkiisa sii wata * Aad baan u baqaynay iyadoo waliba amniga la adkeeyay oo ciidamo tiro badan lahawl galiyay hadana waan baqaynay xataa waxaa dusha naga ilaalinayay diyaarado Helicopter ah.
Wuxuu masuulkan lawaraystay intaas ku daray in dabaaldaga xuskan oo socda ay Shacabka Somalida Ogadenia soo gudbiyeen cabashooyin aad ubalaadhan kuwaasoo kusocda dawlada Dhexe ee Itoobiya, balse aan lasaadaalin karin sida wax looga qaban doono cabashooyinkaas.
Dhanka kale wuxuu masuulku intaas raaciyay in mudadii ay kusugnaayeen Magaalada Jigjiga ay kadheceen dalka Ogadeeniya dagaalo culculus oo udhexeeya Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia iyo Ciidanka Gumaysiga Itoobiya. Sida uu sheegay masuulku waxay dagaaladan kusoo beegmeen maalintii uu socday xuska qawmiyadaha ee lagu qabtay Magaalada Jigjiga. Dayaaladan ayaa saamayn wayn kuyeeshay guud ahaan jawiga munaasabadan siyaasada guracan ee fadhiidka ah looga gollahaa. Halkan Ka Dhagayso:
Wuxuu Masuulkan cadeeyay ineysan Ogadenia xasilooni iyo nabadgaliyo toona kajirin. Shacabka Somalida Ogadeniana uu kujiro dhibaato aad u adag taasoo ay ku hayaan ciidamada maxaysatada ah ee Woyaanaha iyo Woyaane kalkaalka ay ku adeegtaan.
ONA / Ogadenia